September 2019 – Page3– Lwin Htut Kyaw
ရှောင်လင်ကျောင်းမှာ သိုင်းကျင့်နေတဲ့ လူငယ် ၇ ယောက်ရှိတယ်… ၃ နှစ်ပြည့်တဲ့ အခါ ၆ ယောက်က သိုင်းတတ်သွားတယ် ၁ ယောက်က မတတ်ဘူး အဲ့ဒီသိုင်းမတတ်တဲ့ တပည့်က ဂိုဏ်ချူပ်ဘုန်းကြီးဆီသွားတွေ့တယ် ကျွန်တော် ၃ နှစ်ရှိပြီ…
Posted in: Jokes Filed under: General, Joke
တစ်ခါက တာဝတိံသာမှာ နတ်သမီးတစ်ထောင်ဟာ နတ်သားအလာကို နှစ်များစွာစောင့်နေသော်လည်း ရောက်မလာသဖြင့် သိကြားမင်းဦးမာဃထံ သွားမေးကြတဲ့အခါ ….. သိကြားမင်းဦးမာဃလည်း နတ်မျက်စိနဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ နောက်ထပ်( ၇ )ရက်မြောက်မှာ….. လူ့ဘဝကသေဆုံးပြီး နတ်သားဖြစ်လာ့မယ့် လေဖြတ်နေတဲ့ ကပ္ပိယကြီးရောက်လာမယ့်ဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်တယ်။ နတ်သမီးတွေဟာ…
Posted in: General Filed under: Joke
၁. ကြက်သားအာလူးဟင်း + ပဲကုလားဟင်း+ ကန်ဇွန်းရွက်ကြော်+ ဘာလချောင်ကြော် ၂. ငါးမွှေ+ ဂေါ်ရခါးသီးချဉ်ရည်+ ငရုပ်ပွကြော် ++ ဘာလချောင်ကြော် ၃.ငါးဖယ်ငါးဆုတ် + ကျောက်ဖရုံသီးချဉ်ရည် +ရုံးပတီသီးကြော် + ငါးပိထောင်း ၄.ပုစွန် ဆီပြန်+…
Posted in: General Filed under: General, Knowledge
How to register or renew Passport for myanmar people?
၁။ မှတ်ပုံတင်မူရင်း ၂။ သန်းခေါင်စာရင်းမူရင်းတို့နှင့်အတူ မိတ္တူ ၂စုံ ( မိတ္တူအတွက် A4 / legal ဘယ်လိုကူးကူး data အကုန်ပါရင်ရပါတယ်) သက်တမ်းတိုးတွေအတွက် ၃။ Passport အဟောင်း နှင့် Passport…
Posted in: General, Knowledge Filed under: General, Knowledge
Ryzen 1 Comment
iPhone တစ်လုံးဝယ်ပြီဆိုတာနဲ့ စောင်ဆရာဂျီးတချို့ကမေးပါလိမ့်မယ်….မင်း/နင့်အလုံးက USလား,China လား ဘလာဘလာဘလာပေါ့…. ဟုတ်ကဲ့ ပထမဆုံးပြောချင်တာက US,China တင်မဟုတ်ပါဖူးနိုင်ငံအလိုက်Japan,Israel,Korea,Mexico,russia,စသဖြင့်နိုင်ငံအလိုက်အလုံးတွေကို Apple ကထုတ်ပေးထားပါတယ်။ဘယ်စက်ရုံမှာထုတ်လဲဆိုရင် တရုတ်မှာရှိတဲ့ Apple စက်ရုံမှာပဲထုတ်တာပါ။ဒီဇိုင်းကတော့ ကယ်လဖိုးနီးယားမှာပဲဆွဲတာပါ။ဒါကြောင့် မည်သည့် iPhone မဆို Designed…
Posted in: Knowledge, Tech Filed under: Apple, iOS, Tech